Uwuchaze bathini mayelana igama umkhumbi, kungashiwo ukuthi, njengoba imoto kuyothiwa, ngakho-ke ngeke uhambe. Abasunguli be-eqinile, okuyinto manje sonke avtoimperiyami, njalo ebucayi enjalo ebonakala ingasho lutho iphuzu ubunjiniyela umbono, izinkinga ezifana amabheji ku hood nezinye imihlobiso ezivelele. Car brand, amalogo amagama Sekuyisikhathi eside kusukela baba into ebalulekile ukumaketha kanye nefa efanayo noma iyiphi inkampani, njengoba amandla ukukhiqizwa, abasebenzi abaqeqeshiwe kanye nobuchwepheshe.
heraldry Izithuthi nemithetho yayo
Obumavukuvuku izikhali amadolobha, amazwe kanye nemindeni yizicukuthwane yasendulo ukubukisa nje. Ngamunye wabo kuhlanganisa izimpawu kabani incazelo kudinga incazelo, umbala nsimu futhi ngento ukhuluma. Ngokuvamile, kuba isayensi. Dala imishini logo - futhi akulula. Kufanele akhumbule, babe ukuma nenhle, ojabulisa kakhulu iso futhi ukuveza okushiwo imibono esemqoka, kulandele elilodwa noma kwenye automaker. Iningi nale mibandela, futhi abakhiqizi eziholela izimoto bakwazi ukufeza ukuqashelwa imikhiqizo yabo kuwo wonke amagumbi omhlaba. Nye of them fana kwadingeka abalandeli babo siqu, ujoyine amakilabhu.
lula Ford sika
Le ndlela elula lapho ukhetha i-trade mark emlandweni embonini yezimoto emhlabeni wonke Genri Ford isicelo. isibonakaliso sakhe linesizotha, ngoba kungaqondakala ukuthi izimoto yalesi brand abakwenzayo abavamile, abasebenzi, abalimi, onobhala nezinye umphakathi abampofu, okuyinto zonke alien Izicukuthwane ngokwemvelo. Vehicle - yilokho "Ford". I jeans efanayo, ne amasondo amane nje futhi zomshini. I-logo kuyinto okusaqanda nge kahle ezibhaliwe izinhlamvu ezine ezakha igama ezithandwayo zezingoma le standardizer omkhulu, konveyerschika futhi udeshevitelya owanqoba yakhe "Tin Lizzie" umhlaba wonke.
Isibonakaliso endala Gorky Automobile Plant imishini geometrically ngokuphinda Ford logo, izincwadi ezintathu kuphela, zinjalo Russian. Akukho lutho isimanga kuleli, phela, "Emka", futhi edumile front line iloli wolimi - Abesifazane baseMelika, ku ilayisensi yabo ukukhiqizwa yathengwa kanye isitshalo. Kamuva hood ka "iVolga" yavela inyamazane uyathandeka, okuyinto lihlotshiswe imikhiqizo yesimanje ekhiqizwa Nizhny Novgorod.
Easy iphethini sici for German Avtosrtoiteley ezifana "Daimler-Benz," BMW "Opel" futhi "Audi". imishini Izifanekiselo yalezi brand ilula ukuze bazokwazi ukuyichazela ingane. Nokho bakudala lezi imifanekiso lakhe lingeke ladalulwa, be-Jomethri yabo ayikwazi ukukala kunalokho liletha izinhlangano nge crystal ekahle, lapho akukho umugqa owodwa engadingekile.
Imishini eminingi amaphosta bheka more xaka futhi aqukethe izithombe kwezilwane. uhlamvu Izintandokazi ku Heraldry abanjengezilwane - ihhashi. embili izimoto Horse uyayibona isikhathi eside. Taxi abashayeli waba carters lokuqala wangaphambili futhi drayman, esikhundleni okusalungiswa amahhashi kwafika amaloli steel. Izimoto ngokwayo kuvame ngokuthi "yensimbi amahhashi". Isenzakalo esidume kunazo zonke prancing ihhashi logo on the "Porsche" futhi "Ferrari". Naphezu imibono jikelele "Motors Ford", okuhloswe ngazo intando yeningi kanye ukufinyelela imikhiqizo yayo, futhi ine "ihhashi" ayo - "Mustang".
Okuqinile "Lamborghini" ibonisa kunalokho okuthandwa ka umsunguli wayo, kunalokho ezinye inhlangano. Cishe, Italian ukujabulele ukulwa kwezinkunzi okubukelwa, futhi lokho kusenzo logo wenkunzi.
Izifanekiselo "Dodge" izimoto ziyefana kwakunjalo seMpi yoMhlaba yesiBili, lapho adumile "ezintathu kwezine" of owawuthwele amabutho kanye nezinhlamvu kulo lonke anti-Hitler womanyano. ikhanda lemvu, cishe, yayiyingxenye Crest umndeni kaHorace noJohane, abasunguli esizayo ye-automaker.
Mina smear ku hood ka inyathi Belarusian, kuyilapho KamAZ - okusheshayo Tatar ihhashi.
A oseceleni kukhona jaguar namabhubesi. imishini Izifanekiselo esibonisa ezizingelayo, yakhelwe ukuveza amandla okungenakudanjiswa futhi isici swiftness izici lobuchwepheshe we British umenzi wezimoto kanye French "Peugeot". Figure waseseqela phezu hood we Jaguar esanda kutholakala, ngemva kwempi, ngoba igama elidala Swallow Sidecar ngenkathi ekunciphiseni izakhamizi ukukhunjuzwa Albion wazonda isifinyezo SS.
Okunye izimpawu ku hood imoto
Fantasy Onjiniyela logo commercial izinkampani imoto angenamkhawulo ngempela. Kwethulwa kanye izinyoka griffins kumnandi futhi nezidalwa ezinamaphiko ayizingelosi. Ngezinye izikhathi automakers ngenxa yezizathu ezihlukahlukene imoto yami izifanekiselo. Photo imoto Swedish "Saab" kuyi-1946, isibonelo, libonisa uphawu isimo, imiqhele ezintathu, futhi esikhathini zamashumi amahlanu senzeka hood we Interceptor jet, okuyinto eyaba imikhiqizo main enkampani. Esikhathini 80 kokungathathi hlangothi kumnandi Griffin, elingenamikhono izingalo esifundeni, okuyinto iyisonto ukukhiqizwa endaweni eyinhloko Saab likhethiwe.
Ngezinye izikhathi logo kakhulu izingalo eziyinkimbinkimbi futhi iyisicefe amadolobha, lapho izimboni zitholakala.
A uphawu yethu "Lada" akhule abe mdzala isikebhe isiRashiya, sokuhlaziya amagagasi iVolga.
Isilinganiselwa emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni izici, abakhiqizi brand
Kungani kukhona umuntu ongqongqoza lapho ejika umjikelezo ngakwesokudla, ngakwesobunxele?
Toyota Picnic - nemoto for uhambo romantic
Ukubuyekezwa kwe "Mazda Bias 'imoto
Epics Russian mayelana namaqhawe: lobuqaba futhi Christian
Isitimela sezimoto zokuthutha ku-Novosibirsk
Nails - a amapuleti Horny (izimpiko homolog). Indlela yokutshala izinzipho zakho? nail umsebenzi
Ms izimfihlo kwezilwandle: viburnum Buldonezh